NTKWU NDEG B BY N'BYLỌ AH BYR for AH forR for KA Bulgaria | 100% Onu ogugu mmeri | IJE OZI | VISA VISA maka Bulgaria, obibi site na Bulgaria, obibi site na itinye ego Bulgaria, obibi site na mmemme itinye ego Bulgaria, obibi site na mmemme Bul
Ebe obibi site na ego maka Bulgaria na Golden Visa
● Obibi site na itinye ego maka Bulgaria site na itinye ego na ezigbo ala
Best Ndị nnọchite maka obibi site na itinye ego na Bulgaria na ndị ọka iwu maka Nbibi site na itinye ego na Bulgaria na ndị na-ere ahịa maka ịre ụlọ na mmemme obibi na Bulgaria na-arụ ọrụ na njikọ maka nchekwa ndị ahịa.
Nbibi site na ndị ọrụ itinye ego maka Bulgaria na-enye ọrụ maka obibi site na itinye ego na Bulgaria, Mbido site na mmemme itinye ego na Bulgaria, Mbido site na mmemme itinye ego na Bulgaria, nke abụọ site na itinye ego na Bulgaria, obibi abụọ site na itinye ego na Bulgaria, ụmụ amaala na nnabata site na itinye ego na Bulgaria. , Ọnụnọ na-adịgide adịgide site na itinye ego na Bulgaria, Ọnụnọ nke oge site na itinye ego na Bulgaria, Mbido site na atụmatụ itinye ego na Bulgaria, idencynọgide site na itinye ego na Bulgaria, Citizmụ amaala site na itinye ego na Bulgaria, Citizmụ amaala site na mmemme itinye ego na Bulgaria, Citizmụ amaala site na mmemme itinye ego na Bulgaria, nke abụọ Ensmụ amaala site na itinye ego na Bulgaria, ụmụ amaala abụọ site na itinye ego na Bulgaria, obibi na ịbụ nwa amaala site na itinye ego na Bulgaria, obibi na nwa amaala site na itinye ego na Bulgaria, mmemme ụmụ amaala na Bulgaria, Citizmụ amaala site na atụmatụ itinye ego na Bulgaria, Citizmụ amaala site na atụmatụ itinye ego na Bulgaria, nke abụọ paspọtụ na Bulgaria, mmemme paspọtụ nke abụọ na Bulgaria, usoro paspọtụ nke abụọ na Bulgaria, paspọtụ nke abụọ na Bulgaria, obibi na paspọtụ nke abụọ na Bulgaria, paspọtụ nke abụọ na Bulgaria, paspọtụ nke abụọ site na itinye ego na Bulgaria, paspọtụ nke abụọ na Bulgaria, atụmatụ paspọtụ nke abụọ na Bulgaria. Bulgaria, atụmatụ paspọtụ nke abụọ na Bulgaria, visa ọlaedo na Bulgaria, visa visa na Bulgaria, mmemme visa ọlaedo na Bulgaria, mmemme visa ọlaedo na Bulgaria, visa ọla edo nke abụọ na Bulgaria, usoro visa nke ọla edo nke abụọ na Bulgaria, akwụkwọ ikike ọla edo nke abụọ na Bulgaria, visa ọla edo nke abụọ na Bulgaria, ụmụ amaala na visa ọlaedo na Bulgaria, obibi na visa ọlaedo na Bulgaria, amaala ọla edo na Bulgaria, atụmatụ visa ọlaedo na Bulgaria, atụmatụ visa ọlaedo na Bulgaria.
"1 kwụsị ngwọta" maka obibi gị niile site na itinye ego na Bulgaria site na nkwado ndị ọzọ.
Ego pere mpe na Bulgaria maka obibi site na itinye ego: EUR 512,000
Okwu Mmalite Bulgaria na Obibi site na itinye ego
Ndị Britain dị iche iche ahọrọla Bulgaria bụ ndị chọrọ ịlaghachi n'ụlọ ma ọ bụ ndị otu na-ahụ maka ịntanetị site na ala maka nkọwa doro anya na ọnụego ụtụ ha ga-adị n'okpuru. Nkọwa ọzọ n'azụ nhọrọ ndị mmadụ a mere bụ ego a na-akwụ maka ihe ndị bụ isi na Bulgaria.
Bulgaria bụ mba nwere ebe obibi zuru oke, ebe a na-eri nri, yana igwe ụlọ dị iche na nke European Union.
Kwaga mba tere aka na-apụtakarị ịgbanwe ụzọ ndụ ọzọ. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-akwaga Bulgaria, ọ dị mma ịmara banyere ụzọ ndụ ndị bi na ya kwa ụbọchị. Ga-e observeomi emume ọdịnala, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na emume siri ike. N'agbanyeghị nke ahụ, n'oge gara aga, ha bụkwa ndị nwere oke ike, na-arụ ọrụ ma na-achọpụta ụfọdụ ohere dị mma maka izu ike, dịka ọmụmaatụ, ịkụ azụ, egwuregwu oge oyi, ọrụ, na ihe ndị ọzọ
Ọ bụ ezie na emume ole na ole na-eto na ụbọchị doro anya, ndị ọzọ na-agbagharị gburugburu Ista. Banyere ekeresimesi, a na-aja ya mma na ngalaba abụọ, nke mbụ na ụtụtụ nke iri abụọ na anọ n'ọnwa iri na abụọ na nke abụọ na 24 nke Disemba na ụlọ ụka wee rie nri ehihie obi ụtọ.
O doro anya na omenala ole na ole dị adị ka na-atụle n'agbanyeghị Bulgaria amalitela ịbụ mba nwere njedebe.
A na-eji ọtụtụ ndị Bulgaria gaa n'ụsọ oké osimiri ma nwee ekele maka nri.
Nye ọtụtụ ndị, ụdị ndụ ha na ibi na Bulgaria bụ ihe kachasị adọrọ mmasị. Tụgharị n'ụsọ mmiri ná ngwụsị oge opupu ihe ubi, ịgba ọsọ n'oge oyi, igwu golf, na ịgagharị n'ugwu bụcha izu ike ị nwere ike ịnụ ụtọ. Nnukwu ọnọdụ nke Bulgaria na-enye ọtụtụ ohere ọhụụ.
Atụrụ na ewu na-awagharị n'èzí n'ụzọ na-enweghị mgbidi, ọtụtụ ndị bi n'ógbè ahụ na-arụpụta ihe ha kụrụ n'ụlọ. N'agbanyeghị nke ahụ, mgbe ị bi na Bulgaria bụ ihe na-atọ ụtọ, enwere ụfọdụ ndụmọdụ nchekwa ị ga-amata. Ndị aka n'akpa na-arụ ọrụ na ogbe ndịda na ebe ezumike, ọkachasị na mpaghara ndị juru n'ọnụ dị ka ụgbọ njem na ụzọ ndị nwere. Enweela mgbasawanye na-apụnara mmadụ ihe site n'ụlọ obibi na mpaghara ndị njem ama ama. Bulgaria na-arụ ọrụ ọkwa dị larịị nke na-emefu ego onye ọ bụla na nke ụlọ ọrụ na 2011 bụ 10% n'ọnọdụ niile. Maka onye ọ bụla na-atụ anya ibelata ọrụ ha na-akwụ na ụgwọ ma ọ bụ uru azụmaahịa n'ụzọ a, Bulgaria na-adọrọ adọrọ n'ezie!
Ebe obibi Bulgarian na ebe a na-eri nri bụ n'ụzọ doro anya n'okpuru nnukwu akụkụ nke nkịtị maka EU.
Ọnụ ego ndị dị na Bulgaria kwụsịrị site na ntụtụ ha na-esote nkwalite EU - na-egosi na ọ bụ ihe a ga-echeta ịzụta ezigbo mma na mba niile, (belụsọ maka mpaghara ime obodo ahọpụtara na Sofia), maka obere ihe ị ga-akwụ na UK maka ntụsara ahụ yiri. . Asegbazinye ego na Bulgaria na nkịtị bụ 74.06% dị ala karịa na UK.
Dika odi obere ndu nke ndu bu nnuku buru ibu. Ndị lara ezumike nka nwere ike ịchọpụta na ụgwọ ego ha na-akwụ na-aga n'ihu na Bulgaria - ha nwere ike irite uru site na ịkwaga n'ihi na ha agaghị edo onwe ha n'okpuru akụ na ụba dị nso iji nye ha ndụ.
Basic nkọwa maka obibi site Investment for Bulgaria
Opekempe ego maka Ebe obibi site na itinye ego na Bulgaria
Ebe obibi site na itinye ego maka Bulgaria
Oge nhazi maka obibi site na itinye ego na Bulgaria
Nhọrọ ntinye ego maka Ebe obibi site na ntinye ego nke Bulgaria
Ihe kpatara ị ga - eji nweta ego site na itinye ego na Bulgaria
Bulgaria bụ onye so na European Union ma bụrụ onye otu mpaghara mpaghara Schengen n'ọdịnihu dị nso. N'ihi ya, mba ahụ na-enye usoro visa na-adọrọ adọrọ. Nwa amaala Bulgarian nwere ike inye gị ikike ịgagharị na Europe na-enweghị visa. Mgbe afọ 2 nke nhazi oge ị ga-enwe ike irite uru nke ịbụ onye bi na Bulgaria na-adịgide adịgide. Uru ya gụnyere ụtụ isi dị ala, nnweta ahịa nke European Union na ọtụtụ ndị ọzọ. Maka inweta nwa amaala Bulgarian ịkwesighi ịma asụsụ ahụ ma ọ bụ nwee ala na ụlọ. Inweta amaala nke Bulgaria ị nwere ike ịga njem ma biri na mba EU ọ bụla.
A na-etinye abamuru nke ibi na Bulgarian na-adịgide adịgide maka ndị ezinụlọ niile. Mgbe inwetara ebe obibi Bulgarian, nwunye gị na ụmụ gị nwekwara ike ibi na Bulgarian dabere na njikọta ezinụlọ.
Mbibi Site na mmemme itinye ego na Bulgaria
First ga-ebu ụzọ biri ebi ebi ruo ọnwa itoolu. N'ime oge ahụ, achọrọ ka ị gaa Bulgaria ugboro abụọ na Bulgarian Consulate na mba gị. Mgbe nkwadebe nke faịlụ gị gasịrị, a ga-achọ ka ị ziga ego itinye ego nke BGN 1 nde (EUR 512,000). Mgbe enyere asambodo itinye ego na ya, inwere ike itinye akwụkwọ maka ụdị Visa. Mgbe ị nwetara visa gị, ị gara Bulgaria wee nyefee ngwa ahụ. Oge ọzọ ị gara ileta kaadị gị na-adịgide adịgide. Mgbe ị nwetasịrị kaadị obibi gị na-adịgide adịgide, ndị ezinụlọ gị nwere ike inweta nke ha site na itinye akwụkwọ anamachọihe. A ga-achọkwa onye na-arịọ arịrịọ ka ọ gaa Bulgaria ugboro abụọ.
Achọrọ ka ị debe BGN 1 nde (ihe gbasara EUR 512,000) na Pọtụfoliyo Ọchịchị gọọmentị maka oge 5. Mgbe afọ 5 gasịrị, ị ga-enweta ego gị ma agbanyeghị mmasị. Gọọmentị Bulgaria na-ekwe nkwa na ị ga-eweghachi ego gị mgbe oge ahụ gwụsịrị. Ego ego nke ụlọ akụ Europe nwekwara ike ịkwado ego ahụ. Ego nhazi nke EUR 25,000 dị mkpa. Enwere ike ịchọta ego ọzọ maka ụmụaka na-abụghị 18. Ego maka ụmụaka ga-abụ EUR 2,500.
Nkwado ndị ahịa maka obibi site na itinye ego maka Bulgaria
Ndi otu anyi Ịnọ site n'aka ndị na-etinye ego maka Bulgaria na Ịnọ by Onyeka Onwenu Lawyers maka Bulgaria na-enye ndị ahịa na ndị ezinụlọ ha na Bulgaria nkwado maka ịbụ nwa amaala site na itinye ego na Bulgaria, obibi site na itinye ego site na Bulgaria na ohere mbata ndị ọzọ na-abanye na mba 37.
Anyị na-enye ọnụ Ebe obibi site na ọrụ ntinye ego maka Bulgaria, site na ọnụ anyị ntinye ego na ụlọ ọrụ iwu mbata na ọpụpụ maka Bulgaria, ndị ọka iwu mbata maka mbata ọchụnta ego maka Bulgaria, ezigbo ndị obibi site na ndị na-ahụ maka itinye ego maka Bulgaria, ndị ọka iwu na-akwụ ụgwọ maka Bulgaria na ndị na-ahụ maka mbata na ọpụpụ maka Bulgaria.
Biri site na itinye ego site na Bulgaria ruo 37 Mba.
Biri site na mmemme itinye ego na Bulgaria.
Ebe obibi site na Investment nke Bulgaria site na Estlọ
Anyị na-enye nkwado maka itinye ego ụlọ na Bulgaria n'echiche nke na onye ahịa kwesịrị ị nweta ezigbo nloghachi na itinye ego na Bulgaria, oge ọ bụla, ha chọrọ ịpụ na ntinye ego ha mere maka obibi ha site na itinye ego maka Bulgaria. Anyị na ndị mmepe ụlọ kachasị mma kacha mma na Bulgaria nwere ezigbo ndekọ na ngwongwo ha dị na ezigbo ebe na Bulgaria, na-eweta ezigbo ego.
Mkpa ịmata - Bulgaria Residency site Investment
Nọ na ya site na onye ọka iwu itinye ego maka Bulgaria ga-enye aka nkọwa akwụkwọ zuru ezu maka obibi gị nke ọma site na itinye ego na Bulgaria. Ọrụ ọkọlọtọ anyị maka obibi site na Investment to Bulgaria gụnyere:
Anyị na-eduzi mbido ọrụ, iji kwadebe akụkọ tupu ịkwado obibi site na itinye ego maka Bulgaria maka ndị ahịa maka inweta ikike nnabata nke Bulgaria na iji belata ihe egwu nke ịjụ.
Ka anyị jiri akwụkwọ ntinye ego maka Bulgaria gaa n'ihu na obibi gị, anyị ga-achọ akwụkwọ paspọtụ nke ndị ahịa na ndị otu ezinụlọ.
Nsụgharị na apostille nke akwụkwọ Obibi site na ngwa itinye ego maka Bulgaria. Ndị ọka iwu anyị pụrụ iche maka obibi site na itinye ego maka Bulgaria na visa ọla edo ga-enyere aka jupụta ụdị na akwụkwọ.
Ozugbo gị na ezinụlọ gị akwụkwọ maka ibi na ngwa ngwa itinye ego maka Bulgaria dị njikere, anyị ga-ejupụta ya na ndị isi dị mkpa nke Bulgaria.
Ozugbo anabatara akwụkwọ maka obibi gị site na itinye ego na Bulgaria, anyị na-esoro gị zie ozi ọma wee bido ịkwadebe maka nkwado ndị ọzọ.
Anyị anaghị akwado ma ọ bụ nye ndị obibi site na ọrụ itinye ego na Bulgaria ka akpọtụrụ ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ azụmaahịa na Bulgaria:
Ịnọ site na ọrụ itinye ego maka Bulgaria enyeghị ndị ahịa ma ọ bụ ndị na-ekesa ogwe aka na ngwa agha sitere na ma ọ bụ na Bulgaria.
Ịnọ site na mmemme itinye ego na Bulgaria enyeghị maka nlezianya nka na Bulgaria ma ọ bụ ozi nzuzo nke mmemme itinye ego na ma ọ bụ site na ma ọ bụ na Bulgaria.
Ịnọ site na itinye ego nyocha maka Bulgaria enyeghị ya maka iwu ọ bụla megidere iwu na mpụ na Bulgaria.
Ịnọ site na nkwado ego maka Bulgaria abụghị maka ndị na-akụzi mkpụrụ ndụ ihe nketa na Bulgaria.
Ịnọ site na ọrụ itinye ego maka Bulgaria abụghị maka azụmaahịa na-emenye ọgwụ na ọgwụ nuklia dị egwu ma ọ bụ dị egwu na Bulgaria.
Ịnọ site na mmemme itinye ego nkwado maka Bulgaria adịghị maka ndị mmadụ maka Bulgaria na-azụ ahịa, nchekwa na Bulgaria, ma ọ bụ njem nke akụkụ mmadụ.
Ịnọ site na itinye ego maka Bulgaria abụghị maka ụlọ ọrụ nkuchi iwu na-akwadoghị.
Ịnọ ọrụ mmemme maka Bulgaria abụghị maka òtù nzuzo okpukpe na ọrụ ebere ha na Bulgaria.
Ịnọ site na ọrụ itinye ego na Bulgaria enyeghị ndị na-ekiri ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na Bulgaria.
Ebe Obibi Anyị ndị ọka iwu na Bulgaria anaghị akwado azụmahịa azụmahịa na ngwongwo ọgwụ na Bulgaria.
“Ọkwa Dị Mkpa : MM Solutions INC na-akpachapụ anya iji wepụta akwụkwọ AML maka ndị ahịa maka Bulgaria na KYC ha mana anyị anaghị anabata ọrụ ọ bụla maka ịjụ ndị isi na Bulgaria maka nnabata nke ngwa maka Ịnọ site na itinye ego na Bulgaria.
Biri site na itinye ego na Bulgaria na mba ndị ọzọ, gbakwunyere ọtụtụ nkwado ndị ọzọ.
Anyị na-enye ebe obibi kachasị mma site na nkwado ego na Bulgaria maka itinye ego, mbata na ọpụpụ na atụmatụ ụlọ na Bulgaria.
N'ịbụ onye mba ụwa bi na nkwado site na ahụmịhe ego na ihe ndị iwu chọrọ na Bulgaria, anyị na-emepụta ngwọta kacha mma.
Ebe obibi anyị site na ọrụ itinye ego maka Bulgaria na-enye ọnụahịa dị ọnụ ala, yana ọnụego mmeri kachasị mma maka Bulgaria.
Anyị ewerewo ọtụtụ afọ nke ahụmahụ maka obibi abụọ na Bulgaria na-akwado ndị ahịa na ezinụlọ ha maka Bulgaria.
Ahụmahụ obibi site na ndị ọka iwu itinye ego maka Bulgaria na ndị ọrụ iwu na Bulgaria na-enye ndị ahịa nkwado.
Tupu ị bi na Bulgaria na mgbe ị kwadoro, onye otu anyị toro eto ga-anọ ebe ahụ maka azụmaahịa ma ọ bụ nkwado onwe onye maka Bulgaria
Anyị nwere ahụmịhe mba ofesi na obibi site na itinye ego gụnyere Bulgaria, na-enyere ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile aka ọrụ kachasị mma.
Ọ bụrụ, obibi gị site na itinye ego na Bulgaria agaghị ada, enwere mba 36 ọzọ anyị na-ejere ozi, anyị dị njikere na atụmatụ B.
Gbakọọ ego maka obibi site na itinye ego na Bulgaria
Iji gbakọọ ọnụahịa maka obibi site na itinye ego maka Bulgaria biko mejupụta nkọwa niile gụnyere ndị ezinụlọ na afọ ha. N'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ahịa maka Bulgaria, anyị nwere ike ịnye ọrụ ka mma na ọnụ ala. Ngụkọta ego ga, gụnyere, ego maka obibi site na mmemme itinye ego maka Bulgaria na ebubo ndị ọzọ.
Ebe obibi site na itinye ego na Bulgaria na Ọrụ Ndị Ọzọ
Ewezuga obibi site na nyocha itinye ego maka Bulgaria, anyị na-enye azụmahịa, ọrụ IT na ndị ọrụ HR na Bulgaria, nke ị na-enweghị ike ịchọta n'okpuru otu nche anwụ nke ndị ọkachamara ọ bụla ọzọ nyere maka Bulgaria na-eme anyị ụlọ ahịa nkwụsịtụ maka Bulgaria na mba 106.
Anyị na-akwado ụzọ ndị ahịa anyị gafere Residency site na itinye ego maka Bulgaria site na enyemaka nke ndị ọka iwu anyị, ndị ndụmọdụ na njikọta na Bulgaria na mba ụwa.
Mgbe Obibi site na ulo oru mbo ka Bulgaria ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ bido azụmaahịa site na ịzụ azụmaahịa dị na Bulgaria maka ịmalite ozugbo na Bulgaria.
Mgbe obibi site na itinye ego na Bulgaria, Mbido azụmahịa na Bulgaria.
Ndị ọka iwu maka obibi site na itinye ego na Bulgaria
Anyị na-enye obibi obibi iwu site na ntinye ego nke Investment maka Bulgaria na ihe ịga nke ọma maka ndị ahịa anyị dị ezigbo mkpa, maka Bulgaria, anyị bụ ndị isi, ụlọ ọrụ iwu anyị maka Bulgaria nwere ndị ọrụ mbata ọ bụla kachasị mma na Bulgaria, anyị nwere aha ọma maka ịnye ahụmịhe kacha mma maka Bulgaria na doro anya usoro azịza ego maka ndị Bulgaria na ndị ezinụlọ ha. Ebe obibi anyị site na ndị ọrụ ntinye ego maka Bulgaria na-enye azịza echepụtara maka ọganiihu ndị ahịa.
Achọrọ ikike ọka iwu maka Bulgaria maka usoro iwu niile na nnọchite gị site na ndị ọka iwu itinye ego na Bulgaria. Y’oburu na ino na Bulgaria ma obu ichota ileta Bulgaria, anyi nwere ike inweta ikike nke onye oka iwu ebe a.
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị - Mbibi site na itinye ego na Bulgaria
Kedu ihe ntinye ego kacha nta maka ibi na Bulgaria?
Obere ego maka obibi site na itinye ego na Bulgaria bụ EUR 512,000.
You na-enye nkwado iwu maka Bulgaria maka obibi site na itinye ego?
Ee, onye ọka iwu anyị na Bulgaria na ndị nnọchi anya na Bulgaria na-enye nkwado maka obibi site na itinye ego na Bulgaria.
Mbibi site na itinye ego na Bulgaria ọ na-efu ego?
Ọnụ ego obibi site na itinye ego na Bulgaria na obibi site na ego itinye ego maka Bulgaria bụ maka ndị nwere nnukwu ego, anyị na-ana naanị ụgwọ maka ndụmọdụ maka obibi site na itinye ego na Bulgaria, anyị na-enyekwa ọtụtụ nkwado ndị ọzọ maka ibi site na ntinye ego.
Kedu ndị bi na obodo nwere ike itinye akwụkwọ maka obibi site na itinye ego na Bulgaria ma ọ bụ visa itinye ego na Bulgaria?
Enwere ike iji ụmụ amaala nke mba ọ bụla were obibi site na ndị ọrụ itinye ego maka obodo mana mana ihe atụ ole na ole bụ ibi site na itinye ego na Bulgaria site na Asia, Nbibi site na itinye ego na Bulgaria si Africa, Nbibi site na itinye ego na Bulgaria si Europe, Nbibi site na itinye ego na Bulgaria si South America Bido biri site na itinye ego na Bulgaria si Malaysia, Nbibi site na itinye ego na Bulgaria si Bangladesh, Mbibi site na itinye ego na Bulgaria si Indonesia, Nbibi site na itinye ego na Bulgaria si Sri Lanka, Nbibi site na itinye ego na Bulgaria si Nepal, Nbibi site na itinye ego na Bulgaria si India na obibi site na itinye ego na Bulgaria si UAE.
Ọkachamara ọkachamara site na Nduzi Ulo maka Bulgaria
Rịọ oge maka oge obibi gị site na Investment to Bulgaria
Okwu ndị dị mkpa maka ibi na mbinye ego maka Bulgaria